Globalization | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
December 14, 2009 · 12:14 am
This article was published in Sabae Phyu Magazine in February 2006. K Chit Maung is one of my pen names. I sarr-chack (ဆားချက်) this article to post during United Nations Climate Change Conference in Copenhagen. Enjoy it.
Filed under Article, Environment, Globalization
Tagged as Article, Environment, Globalization
March 1, 2009 · 8:55 pm
Globalization: Trace Back from 14 Century
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ၁၄ ရာစုမှစ၍ ပြန်ကောက်ကြည့်ခြင်း
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် အတော်ပဲ မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါပြီ။ အခုစာစုမှာတော့ ၁၄ ရာစုအထိပြန်ခြေရာကောက်ပြီး ခေတ်တစ်ပိုင်းဆီရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဝိသေသတွေနဲ့ အဆက်အစပ်ကို ပုံဖော်ကြည့်ပါမည်။ လူ့သမိုင်း၏ အဆင့်ဆင့် ရွေ့လျားလာမှု၊ အထူးသဖြင့် မြန်ဆန်ရှုပ်ထွေးလာမှုကို အကြမ်းဖျဉ်း နားလည်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် ဘယ်ကတည်းက အရှိန်ရလာနေသနည်း။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ကာလ (Time) နဲ့ ဒေသ (Place) ကိုတည်ပြီး လေ့လာကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ နေရာတိုင်းမှာ တချိန်တည်း တချိုးတစားတည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်တာကို သိထားရပါမည်။ များသောအားဖြင့် အရှိန်ရမှုကို ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ ခေတ်မီဆန်းသစ်လာမှု အဆက်အစပ်ကိုပဲ ပြောနေကြတာများသည်။ စောဒကတက်မှုတွေဟာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ ခေတ်မီဆန်းသစ်မှု (Modernity) ဘယ်ဟာ အရင်ကျသလဲ ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ ဝါတားစ် (Waters) က ဖြစ်ခြေသုံးမျိုး မြင်ပါသည်တဲ့။ ပထမတစ်ခုက ဂဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ သမိုင်းဦးအစမှာပဲ လမ်းကြောင်းစနေပြီ။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အဲဒီအကျိုးဆက်ဟာ အဲဒီကာလကတည်းက အကျိုးသက်ရောက်မှု စပြီးတန်ခိုးပြနေပါပြီဆိုတာပါ။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဒါပေမယ့် မကြာခင်ကမှ ရုတ်တရက် အရှိန်မြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ရောဘတ်ဆန် (Robertson) ကတော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဖြစ်စဉ်ကို ၁၄ ရာစုအထိ ပြန်ကောက်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ မက်ခရိုအမြင်နဲ့ ကဏ္ဌငါးခုခွဲ တင်ပြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မှာ ရိုက်ခေတ်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာနဲ့ ကမ္ဘာ့အစီအစဉ်တွေကို ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ အဓိက လားရာကြီးတွေကို ပြန်ကောက်ဖို့ကြိုးစားတာလို့ ရောဘတ်ဆန်က ဆိုပါတယ်။ အခုဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် အဆင့်တွေမှာတော့ “မီဒီယာနှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း”စာအုပ်ရေးသူ တာဟီ ရန်တာနင် (Terhi Rantanen) က “ဒေါမနဿများတဲ့ခေတ်ကြီး (the Era of Antagonism)”လို့ သူ သမုတ်ထားတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်ရဲ့ မကြာသေးမီက ဖြစ်စဉ်တချို့ကို ထပ်ပေါင်းပြီး ချဲ့လိုက်ပါတယ်။
ရောဘတ်ဆန်က ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းရဲ့ ဝိဝါဒဖြစ်စရာတွေတွေကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ ကောင်းတယ်လည်း မဟုတ်၊ ဆိုးတယ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်တွဲပြီး ရင်ဘောင်တန်းသွားသို့မရသလို ရှေ့နောက်ဆင့်ပြီး လိုက်လာမှာလည်း မဟုတ်တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်မှုရှိတဲ့ သဘောတွေ ပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Filed under Article, Globalization
Tagged as Article, Globalization
December 29, 2008 · 11:14 am
Hot, Flat and Crowded – 2
ပူပြင်း၊ ပြားချပ်၊ ကျပ်ညပ်သော – အပိုင်း (၂)
စာအုပ်၏ ကျောရိုးအဆိုပြုချက်က အလွန်ရှင်းသည်။ အမေရိကတွင် ပြဿနာပေါ်နေသည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင်လည်း ပြဿနာနှင့်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လမ်းပျောက်နေခဲ့ခြင်းက အမေရိက၏ပြဿနာ။ လမ်းပျောက်ရခြင်း အကြောင်းက ၉/၁၁ ကြောင့်ပါသလို၊လွန်ခဲ့သော အနှစ်သုံးဆယ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ မွေးမြူခဲ့သည့် အကျင့်ဆိုးများကလည်း တရားခံ။ စိန်ခေါ်မှုကြီးများကို ရင်ဆိုင်နိုင်မည့်ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို အားနည်းယုတ်လျော့စေခဲ့သည့် အကျင့်ဆိုးများ။
ကမ္ဘာကြီးတွင်လည်း ပြဿနာရှိနေသည်။ ယင်းသည် `ပူပြင်း၊ ပြားချပ် ကျပ်ညပ်´ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု Global Warming ပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် လူလတ်တန်းစားများ အံ့ဘနန်း မြင့်တက်လာမှုနှင့် လူဦးရေမြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးပွားမှုတို့ ပေါင်းစည်းမိပြီး ကျွန်တော်တို့၏ကမ္ဘာမြေကို မတည် မငြိမ်ဖြစ်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်လုပ်ဆောင်နေသည့် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု။ ပူပြင်း၊ ပြားချပ်၊ကျပ်ညပ်တို့ ပေါင်းစည်းမိခြင်းသည် စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ၏လည်မျိုကိုညှစ်၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုတို့ကိုပြင်းထန်စေ၊ စွမ်းအင်ဆင်းရဲတွင်းကို နက်သထက်နက်စေ၊ ရေနံအာဏာရှင်စနစ်ကို ခိုင်မာစေ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်စေသည်။ ထိုသို့ ရောယှက်စီးဆင်းနေသည့် ဂလိုဘယ်ရေစီးကြောင်းများကို ကျွန်တော်တို့ ကိုင်တွယ်ပုံ ကိုင်တွယ်နည်းက နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု ကမ္ဘာရှိ လူနေမှုဘဝသုခကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပေလိမ့်မည်။
Filed under Book, Globalization, Translation
Tagged as Globalization, Thomas Friedman, Translation
December 17, 2008 · 1:26 pm
Hot, Flat and Crowded -1
Filed under Book, Translation
November 22, 2008 · 12:14 pm
Protected: Globalization: A Road to Third World Development?
Filed under Comparative Studies, Essay, Globalization
Tagged as Comparative Studies, Development Process, Essay, Globalization
Archives Select Month September 2020 (3) August 2020 (1) July 2020 (1) June 2020 (6) May 2020 (3) April 2020 (3) March 2020 (2) February 2020 (2) January 2020 (13) December 2019 (10) November 2019 (2) October 2019 (12) September 2019 (4) August 2019 (7) July 2019 (16) April 2019 (8) March 2019 (3) February 2019 (4) January 2019 (7) December 2018 (6) November 2018 (12) October 2018 (12) September 2018 (15) August 2018 (13) July 2018 (4) June 2018 (2) May 2018 (10) April 2018 (3) March 2018 (20) February 2018 (5) January 2018 (5) December 2017 (8) November 2017 (6) October 2017 (4) September 2017 (16) August 2017 (14) July 2017 (3) June 2017 (4) May 2017 (1) March 2017 (2) November 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (2) July 2016 (4) June 2016 (7) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (4) January 2016 (6) December 2015 (2) November 2015 (3) October 2015 (1) September 2015 (2) August 2015 (4) July 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (2) March 2015 (4) February 2015 (9) January 2015 (2) December 2014 (2) November 2014 (8) September 2014 (5) August 2014 (3) May 2014 (4) March 2014 (2) February 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (4) October 2013 (3) September 2013 (6) August 2013 (6) July 2013 (3) June 2013 (4) May 2013 (6) April 2013 (13) March 2013 (4) February 2013 (5) January 2013 (4) December 2012 (12) November 2012 (6) October 2012 (11) September 2012 (5) August 2012 (3) July 2012 (2) June 2012 (5) May 2012 (11) April 2012 (7) March 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (5) December 2011 (1) November 2011 (1) September 2011 (2) August 2011 (11) July 2011 (2) June 2011 (1) May 2011 (1) April 2011 (3) March 2011 (2) February 2011 (5) January 2011 (4) December 2010 (5) November 2010 (4) October 2010 (3) September 2010 (3) August 2010 (3) July 2010 (9) June 2010 (3) May 2010 (11) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (3) January 2010 (22) December 2009 (20) November 2009 (14) October 2009 (2) September 2009 (4) August 2009 (7) July 2009 (6) June 2009 (7) May 2009 (3) April 2009 (12) March 2009 (11) February 2009 (11) January 2009 (19) December 2008 (18) November 2008 (48) October 2008 (4) September 2008 (18) August 2008 (23) July 2008 (23) June 2008 (30) May 2008 (19) April 2008 (9) March 2008 (10) February 2008 (6) January 2008 (17) December 2007 (4) November 2007 (14) October 2007 (5) September 2007 (12) August 2007 (7) February 2007 (3) January 2007 (2) November 2006 (1) September 2006 (2) July 2006 (3) June 2006 (2)
Categories Select Category American (1) Announcement (49) Anthropology (20) Art (89) Article (93) ေကတီေက (1) Biography (7) Blogging (19) Book (15) Book Review (7) Buddhism (3) Burma (4) Cambodia (1) Cartoon (11) Chin (2) China (3) Classic (25) Collection (3) Comparative Studies (15) Conceptualization (3) Critic (2) Cross-Border Studies (6) Culture (6) Data (4) Development (14) Developmentalism (4) Dialogue (5) Diary (11) Dictionary (11) Download (7) e-Book (19) e-Library (2) Ecology (3) Economics (10) Education (20) Environment (12) Environmentalism (6) Essay (49) Ethnic Minority (16) Existence Magazine (11) Experience (55) Facebook (8) Fellowship (1) Gender (7) Globalization (4) Health (7) History (29) Human Rights (3) International (28) Interview (6) IT & Blogging (27) Joke (17) Journalism (28) Journalist (3) Karen (1) Karenni (3) Kayah (2) Kayan (3) Knowledge (23) Ko Hla Aung (1) Language (6) Lao (1) Literature (29) Local Knowledge & Local Right (10) Magazine (2) Maghadewa Linkar Thit (3) Management (6) MCN (33) Media (25) Military Affairs (3) MOE (6) Movie (4) Music (9) Myanmar (9) Nandar Phone Myint (8) Nargis (16) Nation-State (1) Natural Resource Management (12) News (48) Novel (4) Obituary (20) Paper (16) Personal (11) Perspective (9) Philosophy (32) Photo (14) Poem (132) Political Ecology (12) Politics (120) Poststructuralism (3) Poverty (7) Property Right (3) Psychology (2) Reading Notes (7) Reference (7) Religion (37) Research (45) Research Methodology (2) Review (5) Review (1) Revolution (1) Satire (11) Scholarship (3) Shan (3) Sharing (15) Short Story (14) Social Network (3) Social Science (2) Southeast Asia (3) Story (8) Summary (25) Survey (1) Sustainable Development (2) Tabloid (1) Tag (7) Thailand (8) Theories and Concepts (7) Thesis (2) Thought (2) Trade (2) Training (1) Translation (10) Uncategorized (23) Unicode (9) WikiLeaks (5) Wikipedia (13) Wordpress (5)
WFH and SAH
“ကာတွန်းဆရာတချို့သို့ မတို့ တတို့”
ဗလ (ခ) ဒီနိုင်းခတော့ သွားနှင့်ပြီ
Announcement Anthropology Art Article Blogging Book Book Review Buddhism Cartoon Classic Comparative Studies Development Development Process Diary Dictionary Download e-Book Economics Education Environment Essay Ethnic Minority Existence Magazine Experience Facebook Gender Globalization Health History International Interview Ism IT & Blogging Joke Journalism Karenni Kayan Knowledge Language Literature Local Knowledge Local Right Management MCN Media MOE Music Myanmar Nanda Phone Myint Nargis Natural Resource Management News Novel Obituary Paper Persoanl Philosophy Photo Poem Politics Poverty Reading Notes Religion Research Review Satire Short Story Story Summary Tag Thailand Translation Unicode Wikipedia Wordpress